Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Ganacsi Guryo Ma-guurto ah 2022 | Hagaha Buuxa
Ma doonaysaa in aad qaadato masuuliyada iyo daqiiqad si aad u bilawdo ganacsigaaga hantida maguurtada ah intii aad ka noqon lahayd shaqaale ka shaqeeya shirkadahooda guryaha? Waa kuwan waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u noqoto maamulahaaga, laga bilaabo fikradaha muhiimka ah ilaa tillaabooyinka ay tahay inaad qaaddo bilawga ganacsiga guryaha.
Waa maxay Ganacsiga Guryaha Ma-guurtada ah?
Kahor intaanan si qoto dheer u galin bilawga ganacsiga guryaha, waxaad u baahan tahay inaad marka hore ogaato aasaaska; waa maxay ganacsiga hantida maguurtada ah runtii. Ganacsiga hantida ma-guurtada ah waa shirkad ganacsi oo ka shaqaysa wax iibsiga, iibinta, maamulka, ama maalgashiga hantida ma-guurtada ah. Guryaha ma-guurtada ah ee mararka qaarkood loo yaqaan "guryaha dhabta ah". Ha ku wareerin hanti gaar ah iyo hanti shaqsiyeed.
Labada erey waxay ku kala duwan yihiin si ay hantida dhabta ahi u guurto si ka duwan hantida gaarka ah. Hantida gaarka ahi waxay noqon kartaa waxyaabaha uu qofku leeyahay sida dharka, agabka, alaabta guryaha iwm, hantida ma guurtada ahi waa dhulka iyo wax kasta oo si joogto ah ugu xidhan dhulka, qofkuna wuxuu yeelan karaa dhammaan xuquuqaha lahaanshaha dhulkaas oo uu ka iibin karo. u kireeyo ama u isticmaal sida ay rabaan.
Farsamo ahaan, hantida ma-guurtada ahi waa dhul iyo horumar kasta oo la taaban karo oo ku dul hadhi kara ama lagu rakibi karo. Horumarka noocaan ah wuxuu noqon karaa dhismo halkaas laga sameeyay, waddo ama wax dhulka la geliyey sida nidaamka septic-ga.
Marka la eego noocyada hantida maguurtada ah, waxaan u kala saari karnaa hantida maguurtada ah iyadoo loo eegayo isticmaalkeeda guud sida; ganacsi, warshado, deegaan, dhul cayriin ( banaan) iyo ujeedo gaar ah. Ka hadalka ganacsiga, waxaad si toos ah ama si dadbanba u maalgashan kartaa hantida ma-guurtada ah.
Kuwa doonaya inay u aadaan ikhtiyaarka tooska ah, waxaad samayn kartaa taas adoo iibsanaya guri ama hanti kale sida hanti kiro ah iyo kuwa raba inay si dadban u sameeyaan, markaa waa inaad taas ku samaysaa kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah ( REIT).
Sidee u Shaqeeyaa Warshadaha Guryaha Ma-guurtada ah?
Aynu nidhaahno inaad rabto inaad guri ka iibsato Maraykanka:
Marka hore, mulkiilaha guriga iyo wakiilka liisku waxay galaan qandaraas iibka guriga.
Guriga ayaa markaa lagu daabici doonaa Adeegga Liistada Badan (MLS) ee degaanka ee wakiilka liisku.
Marka wakiilka Iibsaduhu ogaado guriga, waxay wax ka waydiiyaan iibsadayaasha iman kara wakiilka liiska. Ka dib wakiilka iibsadaha ayaa ka wada xaajoonaya qiimaha guriga lagu iibsanayo. Marka ay gaadhaan heshiiska ugu dambeeya ee qiimaha, waxay hubiyaan sharcinimada iibka.
Ugu dambeyntii, Wakiiladu waxay heli doonaan komishankooda ka dib iibka si guul leh loo sameeyo.
Maxay Qaadanaysaa In La Bilaabo Shirkad Guryo Ma-guurto ah?
Ma doonaysaa in aad naftaada ka sii dayso xadhiga shaqo ee sagaal ilaa shan, ma waxaad u baahan tahay xoriyad dhaqaale, miyaad ku riyoonaysaa inaad noqoto madaxaaga, hadday haa tahay, waa waqtigii aad ka fikiri lahayd inaad bilowdo ganacsi hanti ma guurto ah.
Si daacadnimo loo sheego, waxay u baahan tahay shaqo adag, go'aan iyo dadaal si aad u yeelato ganacsi hanti ma guurto ah oo guuleysta. Laakiin haddii aad u taagan tahay tartanka, aan bilowno.
Waxaan ku soo koobi doonaa sida aad u bilaabi karto ganacsi hanti ma guurto ah siddeeddan tallaabo ee hoose;
Aqoonso yoolalkaaga gaarka ah: Is weydii su'aalo ay ka mid yihiin; ma waxaan rabaa in aan maal galiyo wakhti dhiman ama wakhti buuxa, anigu dhaqaale ahaan diyaar ma u ahay in aan bilaabo maal-gashiga, ma leeyahay nidaam taageero iyo waa maxay dhiirigelintayda. Jawaabahaagu waxay kaa caawin doonaan go'aaminta istaraatiijiyadaada bilowga ah iyo qorshahaaga ganacsi.
Samee cilmi baaris: Marka aad aqoonsato yoolalkaaga waxa la joogaa wakhtigii aad madaxa u quusi ​​lahayd marka hore wejiga cilmi-baarista. Tan waxaa ka mid ah samaynta falanqayn qoto dheer oo ku saabsan suuqa deegaankaaga iyo dib u eegis lagu sameeyo tartamayaashaada ugu waaweyn. Ka dib markaad barato arrimaha dibadda, bilow inaad baarto arrimaha gudaha, tani waxay ka dhigan tahay; tilmaamidda meelaha aad ku fiican tahay iyo meelaha aad ku liidato iyo sidoo kale go'aan ka gaarista sida aad uga soocdo tartanka.
Samee fikradaada ganacsi: Kadib markaad samaysay cilmi-baaris kugu filan, waa inaad awood u yeelatid inaad sameyso fikrado dhowr ah oo ku saabsan sida saxda ah ee ganacsigaaga ka caawin doona inuu guuleysto. Meel kasta oo aad doorato waa in lagu muujiyaa qorshahaaga ganacsi iyo sidoo kale agabka iyo qalabka aad qorsheynayso inaad ka faa'iidaysato.
Dooro magac ganacsi oo bilow LLC (Shirkadda Mas'uuliyadda Xaddidan): Markaad magaca u dooranayso ganacsigaaga cusub, hubi inay tahay mid xasuus leh, hal abuur leh, oo soo jiidasho leh oo si sax ah u qeexaysa ganacsigaaga. Kaliya ka dib markaad magacawdo ganacsigaaga waa inaad bilowdo LLC. LLC waxay adiga iyo ganacsigaaga ka ilaalin doontaa deymaha mustaqbalka iyo sidoo kale waxay kugu abaalmarin doontaa faa'iidooyinka canshuuraha dheeraadka ah.
Dhis website: Joogitaanka shabakadu waa qasab milkiile kasta oo ganacsi gaar ahaan kuwa ku jira adduunka hantida maguurtada ah sababtoo ah hogaamiyayaal badan oo suurtagal ah ayaa ka iman doona online. Ha dareemin culays badan, waxaa jira shabakad dhiseyaal badan oo bilaash ah ama qiimo jaban oo online ah oo loogu talagalay kuwa bilowga ah ama waxaad shaqaaleysiin kartaa horumariye mareegaha.
Samee istaraatiijiyad suuqgeyn: Waxaa jira iimaylka suuqgeynta warbaahinta bulshada, suuqgeyn toos ah boostada, iyo xeelado kale oo fara badan. Istaraatiijiyad kastaa waxay leedahay faa'iidooyin iyo khasaare u gaar ah, markaa si xikmad leh u dooro xeeladda suuqgeyneed. Ka bilow inaad aqoonsato waxa adiga iyo ganacsigaaga ka dhigaya mid qiimo gaar ah leh. Kajawaabista tan waxay kaa caawin doontaa in aad ololayaal suuqgeyneed samayso hadda oo aad dooratay xeelad suuqgeyneed.
Bilow olole: Horey u soco adiga oo bilaabay ololahaaga ugu horreeya haddii ay tani ka dhigan tahay inaad dirto iimaylkaagii ugu horreeyay, iibsashada xayaysiiskii Facebook ee ugu horreeyay ama abuurista waraaqdaada koowaad. Hubi inaad si joogto ah u matasho summadaada dhammaan kanaalada suuq-geynta.
Lasoco hogaanka: Waxa ugu xun ee milkiilaha ganacsiga hantida maguurtada ah uu samayn karo waa inuu bilaabo olole suuqgeyn oo dhowr ah hal mar oo uu iska indhatiro qulqulka korodhay ee hogaaminta soo galaysa sababtoo ah hogaanka ayaa laga yaabaa inaanay isla markiiba keenin fursad faa'iido leh. Taas macnaheedu maaha in hogaanku aanu mustaqbalka u noqon wax qiimo leh. Marka ay timaado jiilka hogaanka, ka dhig hadafkaaga inaad dhisto xiriir dhab ah macmiil kasta oo suurtagal ah.
Dhis shabakad: Dhisidda shabakad adag iyo kooxda taageerada waa mid aan la mid ahayn haddii aad rabto inaad guuleysato. Waxaad u baahan tahay inaad wakhti geliso oo aad xidhiidh la samayso qof kasta laga bilaabo asxaabtaada ilaa macaamiisha ilaa la taliyayaasha.
Waa maxay Kharashka Bilowga Ganacsiga Guryaha?
Waxaa jira wakhti dheer oo hogaamineed ka hor inta aanad dhab ahaantii bilaabin dakhli. Way fududahay in la arko sababta qaar ka mid ah wakiilada hantida maguurtada ah ee raba ay u niyad jabaan oo ay iskaga tagaan sannadaha ugu horreeya ee hawlgalka. Tani waa sababta ay muhiim kuugu tahay inaad ogaato kharashyada ku soo fool leh si aadan indhahaaga u qabsan.
Kharashaadka badankoodu waxa ay galaan marka aad shatiga qaadanayso, ka dib marka aad hesho shatiga si aad si dhab ah isu dejiso oo aad bilowdo shaqada ka dibna ugu dambayn kharashyada bilaha ah ee aad bixin doonto si aad ganacsigaaga u sii socoto. Aynu galno inta ay le'eg tahay run ahaantii kharash si aad u hesho liisankaaga. Waa inaan horudhac u sameeyaa tan anigoo leh way ka duwan tahay gobol kasta.
U qaybinta kharashyadan qaybo ka mid ah, waxaan u dooran doonaa Nebraska inay noqoto xaaladayada diirada laakiin waxaan sidoo kale iftiimin doonaa qaar ka mid ah gobolada kale;
Kharashyada waxbarashada shatiga hore: Waxa ugu horreeya ee aad bixin doonto waa fasalladaadii hore ee shatiga. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay kuxirantahay gobolkaaga iyo sidoo kale dugsiga hantida ma-guurtada ah ee aad doorato iyo tirada saacadaha loo baahan yahay. Nebraska, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato 66 saacadood oo waxbarasho ah, waxaad qaadan doontaa laba fasal oo 30 saacadood ah, kuwaasna waxay ku kacayaan $275 midkiiba. Kadib, waxaad yeelan doontaa aqoon-is-weydaarsi lix saacadood ah oo ku saabsan anshaxa waana ku dhawaad ​​$55. Kharashyadani waxay wadar ahaan noqon karaan ilaa $605 kaliya. Waan ogahay in gobollo badan ay aad uga badan tahay. Tusaale ahaan, Texas, waxay kugu kacaysaa ku dhawaad ​​$1000.
Qiimaha imtixaanka shatiga guryaha: Waxa ku xiga ee ay tahay inaad bixiso waa codsigaaga guddiga hantida maguurtada ah iyo kharashka imtixaanka. Nebraska, dhab ahaantii waxaad bixinaysaa labadaba labadaba. Gobolada qaar, waxaad u bixin kartaa si gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, wadarta kharashkoodu waxa uu noqonayaa $285, "$150-tijaabo, iyo $135-codsi." Kharashyadani aad ugama duwana kuwa gobolada kale.
Sawirka faraha iyo kharashka hubinta taariikhda: Waxaa lagaa qaadi doonaa farahaaga waxaana lagu socodsiin doonaa baaritaanka taariikhdaada. Tani waa tillaabada ugu dambeysa ee aad sameyn doonto ka hor inta aadan si dhab ah loo oggolaan imtixaanka gobolka. Waxa ay isu geeyeen labada kharash, wadarta guudna waxay noqonaysaa $45 ee faraha iyo hubinta taariikhda. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale bixin doontaa kharashka fasalka udiyaarinta imtixaanka laakiin tani gabi ahaanba waa ikhtiyaari waxayna ku kici doontaa ilaa $165.
Kharashka bixinta shatiga: Ka dib markaad ku gudubto imtixaankaaga, waxaad ku bixin doontaa $80 khidmadda bixinta shatiga. Markaa wadarta guud ee khidmadaha shatiga waxay noqon doontaa ilaa $1064, tani waxay noqon kartaa wax ka badan ama ka yar adiga iyadoo ku xidhan gobolkaaga iyo inta saacadood ee waxbarashada aad u baahan tahay inaad qaadato.
Shatiga kadib ama kharashka waxbarashada cusboonaysiinta sanadka koowaad: Dhawr gobol ayaa bixiya shatiga ku meel gaadhka ah sanadkaaga ugu horeeya laakiin waxaa lagaaga baahan doonaa inaad dhamaystirto shatiga dambe si aad u hesho shatiga joogtada ah. Qiimaha la qiyaasay waa ku dhawaad ​​$100 ilaa $1000+.
Qiimaha ilaalinta shatiga hantida ma-guurtada ah: Kadib markaad hesho liisankaaga, waxaad haysataa ikhtiyaar aad ku sii wadi karto firfircoonida ama firfircoonida. Ku haynta shatigaada firfircoon waxay u baahan tahay kharashyo dheeraad ah. Wakiilada hantida maguurtada ah waxay caadi ahaan tan ku qiyaasaan ku dhawaad ​​$1500 sanadkii.
Kharashyada dallaalka: Ma yeelan kartid shatiga hantida ma-guurtada ah ee firfircoon adigoon ka hoos shaqayn dullaal shati haysta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in ay kugu adkaato in aad liisankaada dullaal ka laadlaadsho ka hor inta aanad samayn dillaal maadaama ay qaali tahay. Kharashka dullaalnimada ugu caansan waa khidmadda miiska, "kharashka xafiiska". Xataa haddii aanad lahayn xafiis gaar ah, waxa laga yaabaa inay weli kugu dallici kharashkan. Mid kale wuxuu noqon karaa khidmad ganacsi, tani waxay noqon doontaa boqolkiiba dheeraad ah oo lagu daray macaamil kasta oo aad leedahay. Waxaad u baahan tahay inaad waydiiso sida saxda ah nooca khidmadaha aad bixin doonto marka aad waraysato. Maadaama aan ka hadlayno kharashyada bilowga ah ee la saadaalin karo, waxaan diiradda saari doonaa khidmadaha miiska oo keliya sababtoo ah waxaad ku yeelan doontaa kuwan iyada oo aan loo eegin wax kasta oo iib ah. Qiyaasta qiimaha khidmadaha miiska ayaa noqon doona ilaa $600+ sanadkii.
Khaladaadka iyo Kharashaadka ka tegista: Kuwaas, waxaad ka bixin doontaa dullaalkaaga waxayna ku kici doonaan qiyaastii $600 ama ka yar sannadkii.
Qiimaha ganacsigu: waxaa 2019 ka warbixiyey Ururka Qaran ee Realtors (NAR) in qiyaas dhan $4,600 sanadkii lagu kharash gareeyey xubnaha guud ahaan kharashaadka ganacsiga dhexdhexaadka ah.
Sideen uga Bilaaban Karaa Shirkadayda Guryaha Maguurtada ah?
Ma jeceshahay inaad gasho goobta hantida ma-guurtada ah oo aad ka soo baxdo xirfadle hanti ma-guurto ah meel eber ah? Waa kuwan waxa aad u baahan doonto inaad samayso.
Qaado shatiga hantida ma-guurtada ah: Helitaanka shatiga hantida ma-guurtada ah waa talaabada ugu horeysa ee muhiimka ah ee xirfadaada hantida maguurtada ah. Qiimaha iyo shahaadooyinka helitaanka shatiga way ku kala duwan yihiin gobolo kala duwan.
Hel dillaal Dilaalinta guryaha waa wakaalad ay ku shaqeeyaan wakiilada guryaha. Waxaa jira dallaalyo kala duwan oo ka soo baxaya intarneedka, markaa samee wax yar oo qod oo ogow ikhtiyaarka ugu fiican ee ku habboon yoolalkaaga.
Ku biir Ururka Qaranka ee Realtors: Tani waxay muhiim u tahay qofku inuu noqdo qof dhab ah.
Bixi lacagahaaga: waa inaad dabooshaa kharashaadka bilowga ah sida khidmadaha shatiga, khidmadaha dullaalnimada ka hor inta aanad bilaabin iibinta guryaha malaayiin doolar ah.
Raadi lataliye: Wax ka baro kuwa kugu xeeran gaar ahaan kuwa khibradda u leh goobta oo arag haddii ay ku caawin karaan.
Dhis astaantaada gaarka ah: Waa inaad had iyo jeer dhistaa astaantaada gaarka ah oo aad ballaariso shabakadaada marka lagu daro helitaanka macaamiil ku habboon. Waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto dadka leh dhibaatooyinka hantida ka dibna aad u caawi dadkaas. Waxa kale oo aad dhisi kartaa shabakad shakhsi ahaaneed oo hantida maguurtada ah oo ka dhigi kartaa shabakadaada mid xoogan.
Ugu dambeyntii, iyo laga yaabee caarada ugu muhiimsan oo dhan, waa in la sabro. Bilawga ganacsiga hantida ma-guurtada ah waxa laga yaabaa in aanu ahayn kan ugu fudud, laakiin khibrad iyo shaqo adag waxa aad heli doontaa lacag aad u badan wakhti yar gudaheed. Weligaa ha is dhiibin, kabahaaga xidho, oo madaxaaga kor u qaad.
Ma Ku Bilaaban Karaa Ganacsigayga Guryaha Iibinta Lacag La'aan?
Waa inaan raacnaa tilmaan-tallaabo ah oo ku saabsan sidaad u bilaabi lahayd;
La shaqee maalgeliyaha: Tani waxay u furi kartaa albaabo fursado cusub ganacsigaaga hantida maguurtada ah. Waxaa jira waqtiyo aad hesho hanti faa'iido leh oo baaxad fiican leh laakiin ay ka maqan tahay lacag aad ku maalgashato. Xaaladahan oo kale, habka ugu wanaagsan ee aad ku hubin karto inaad xirto heshiiska waa inaad la wadaagto maalgeliyaha guryaha. Maalgashadayaal badan ayaa raba inay lacag ku maalgeliyaan hantida ma-guurtada ah, laakiin midkoodna waqti ma haysto ama ma rabaan inay qabtaan dhammaan shaqooyinka maamulka ama maamulka ee la xiriira hantida. Waxaad la wadaagi kartaa maal-galiyahan oo kale oo aad ka dhabayn kartaa riyadaada ah in aad maamusho ganacsi hanti ma guurto ah oo guuleysta.
La wareeg Maalgelinta Ijaar-ku-lahaansho: Siyaabo kale oo lagu bilaabo ganacsi ganacsi oo aan lacag lahayn waa in la qabsado kiro-la- maal-gashi. Dad badan ayaa heshiisyadooda ijaarka u isticmaala dariiqa gelitaanka warshadaha guryaha. Halkan, maal-galiyuhu waxa uu saxeexaa ikhtiyaarka iibsiga marka uu guriga kireynayo. Waa waqtigii aad qabsan lahayd hanti mustaqbalka ku heli doonta faa'iido.
Jiilka Lead: Tani waa qayb muhiim u ah dhammaan ganacsiyada iyo ganacsiga hantida maguurtada ah ee aan ka reebin. Si aad ugu guulaysato khadkan, waxaad had iyo jeer bilaabi kartaa abuurista hogaan heer maxalli ah. Marka hore raadi macaamiil ama wakiillo raadinaya guri ka dibna raadi iibiyeyaasha. Ugu dambeyntii, ku iibi hogaankaaga qiimo iyadoo ku xiran tayada hogaanka.
Ku Dhaqan Magaca Horumariyeyaasha: Waa inaad la xiriirtaa horumariyeyaasha oo aad saxiixdo qandaraas si aad u iibiso hantidooda. Isticmaalka xeeladan, waxaad xayeysiinaysaa oo iibisaa guryaha horumariyaha oo aad kasbato guddi heshiis kasta oo xiran.
Dhexe: U shaqaynta sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya iibsadaha iyo iibiyuhu waxay ku heli doontaa tilmaan marka heshiiska la xiro.
Sidaad kor ku soo aragtay, maaha wax lacag ah laakiin waa xirfadaha go'aan qaadashada, shaqada adag iyo go'aan qaadashada haddii aad rabto inaad ku guulaysato ganacsiga guryaha.
Dib u eegida Shirkadaha Guryaha Ma-guurtada ah ee Maraykanka
Xaruntu waxay ku taal Austin, Texas. Shirkaddu waxay heshay Dakhli Sannadeedka $351.2 Bilyan sida ku cad 2019. Keller Williams Realty waxay diiradda saartaa horumarinta shirkadooda guryaha ee dibedda waxayna tixgelisaa shirkadda ugu weyn uguna faa'iidada badan hantida maguurtada ah ee caalamka.
Maamulida Brookfield Asset:
Xarunteedu waxay ku taal Toronto, Canada. Shirkaddu waxay heshay Dakhliga Sannadlaha ah $67.826 Billion sanadka 2019. Hadda, waxay ka mid yihiin shirkadaha guryaha ee ugu sarreeya adduunka oo leh hanti dhan $208 bilyan iyo ilaa 22,000 oo shaqaale ah oo ka shaqeeya shirkadda.
Xarunteedu waxay ku taal Los Angeles, California. Shirkaddu waxay heshay Dakhli Sannadeedka $23.894 Billion sanadka 2019. Marka ay timaado gadashada iyo iibinta hantida ma-guurtada ah ee ganacsiga, CBRE ayaa ah dallaalka ugu sarreeya shaqada.
Hadda oo aan soo koobnay waxa loo baahan yahay si loo bilaabo ganacsi hanti ma guurto ah iyo arrimo kale oo muhiim u ah arrintan, waxa kaliya ee aad sameyn karto xilligan waa inaad nasato oo aad daawato ganacsigaaga oo kobcaya.
Laakiin, waa haddii aad la kulanto dhammaan waxa ay ku qaadanayso si aad u gaadho guushaas sida aynu kor ku eegnay. Haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah iyo faallooyin, ku qor qaybta faallooyinka ee hoose, waxaan ku raaxaysanaynaa akhrintooda.
Ganacsiga hantida maguurtada ah faa'iido ma leeyahay?
Haa Suuqa hantida maguurtada ah waa suuq trillion dollar ah.
Waa maxay mushaharka wakiilka guryaha?
Waa maxay nooca hantida maguurtada ah ee sameeya lacagta ugu badan?
Intee in le'eg ayaa koorsada Hanti-Maguurtada ah?
4-6 bilood celcelis ahaan.
Helitaanka shatiga guryaha ma u qalantaa?
Haa Markaad haysato shatiga hantida ma-guurtada ah, waxaad ku tababaran doontaa warshadahan.
realestateexpress.com/career-hub/noqdo-wakiil-ma-guurto ah/7-kharash-ka-fikirka-marka-bilaaban-xirfad-ma-guurto ah/
Maalgelinta Hantida Ma guurtada ah ee Bilowga ah
15 Talooyin ku saabsan Maalgelinta Guryaha Ma-guurtada ah ee Bilowga ah
Waa maxay sababta ay tahay inaad u tixgeliso hantida maguurtada ee fog fog
Sidee TFSA uga Shaqaysaa Kanada | Tilmaan-Talaabo-Talaabo Buuxo